Ukungabikho okanye ukungabikho oksijini kwi-aquarium: ungafezekisa njani ibhalansi egqibeleleyo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izifo zentlanzi, Intlanzi
Xa siqala ukulungisa i-aquarium ukuze izilwanyana zethu ezincinci zihlale kwiimeko ezilungileyo, kufuneka sazi isixa seoksijini ekufuneka amanzi enayo ukuze babe sempilweni. Esinye sezizathu eziphambili zokuba iintlanzi zigule ngenxa yokunqongophala okanye ukugqitha kweoksijini enyibilikileyo emanzini. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi iimfuno zeoksijini ezifunwa yi-aquarium ukuze iintlanzi zikwazi ukuhlala kwiimeko ezilungileyo.
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba yintoni ingxaki yokunqongophala kweoksijini kwaye ungabinayo ukungabikho okanye ukungabikho oksijini kwi-aquarium.
1 Iingxaki zeoksijini kwii-aquariums
2 Akukho ntswelo okanye oksijini igqithileyo kwi-aquarium
3 Iindlela zokuphefumla i-aquarium
Iingxaki zeoksijini kwii-aquariums
Esinye sezizathu eziphambili ezinokubangela ukuba iintlanzi zigule kukuba kwioksijini. Ubukhulu becala oku kwenzeka ngenxa yokuba i-aquarium ayilawulwa kakuhle kwaye ayinakho ukulinganisela ukuba iintlanzi kufuneka zingabinangxaki kwaye zingenasifo.
Esinye sezizathu eziphambili ezinokubangela ukuba iintlanzi zingabikho ioksijini kukulawulwa kakubi komoya ongeyonyani, ikakhulu kutofelwe iimpompo okanye amaqamza. Ukuba kunjalo amanzi angangcoliswa kukungcola okuthintela ioksijini.
Konke oku kuvela kwinto yokuba i-aquarium inokugcwaliswa ngakumbi ngeentlanzi ezininzi kwindawo encinci, ngaphandle kokunciphisa inkululeko yokuhamba, kuthintela ioksijini efanelekileyo.
Ukufumanisa ukuba iintlanzi azinayo i-oksijini, siya kuqaphela ukuba zihlala ziqubha njani ixesha elide, kwaye ngokoluphi uhlobo abanokuthi bazame ukutsiba ngaphandle kwe-aquarium ukuze bathathe ioksijini.
Kwelinye icala, ioksijini egqithisileyo ayiloncedo kubomi bentlanzi, ukugqitha kwayo kuvelisa ukuphazamiseka okunzulu njengesifo esaziwa ngokuba yi-'mbolism yomoya '.
Kutheni i-oxygen saturation? Ukuba kwi-aquarium sinendawo yokuhlala enezityalo eziwenza kakuhle umsebenzi wazo, ngekhe kubekho ngxaki ekulawuleni. Kodwa ukuba i-aquarium iphantsi kwelanga elininzi, sitshintsha ubushushu be-aquarium kwaye izityalo ziya kuyonyusa ioksijini ngokwazo, Ukutshintsha ngokupheleleyo ubomi beentlanzi. Ngokuchanekileyo isifudumezi sibonisiwe ukuba silawule iqondo lobushushu elifanayo, kungoko siphepha ukubabeka elangeni.
Siza kuqaphela ukuba iintlanzi zineoksijini engaphezulu ukuba sibona ukuba amaqamza amancinci aveliswa kwimiphetho yawo, ke iintlanzi kufuneka zigqithiselwe kwitanki leentlanzi kunye namanzi aneoksijini ngokomlinganiso wawo, ukuba ngokuchaseneyo asiyiqondi, Iintlanzi ziya kufa.
Kufuneka sazi ukuba intlanzi kufuneka iphefumle ioksijini enyibilikileyo emanzini phantse kuzo zonke iimeko. Ngesi sizathu, kubonakala kubalulekile ukuba amanzi ethu aneoksijini eyaneleyo ukuze ezi zinto ziphilayo zihlale kuwo. Gcina ukhumbula ukuba isixa seoksijini esichithakeleyo siza kutshintsha ngokuxhomekeke kwinani leentlanzi kunye nobungakanani be-aquarium. Ukuba i-aquarium ishushu okanye ifudumele Kuyimfuneko ukwazi ukuba ukunyibilika kweegesi kungaphantsi kunaleyo ikhoyo i-aquariums yamanzi abandayo. Oku kwenza ukuba iintlanzi zamanzi ezikwitropiki zibe neoksijini encinci kunezo zidada emanzini abandayo.
Umzekelo wentlanzi ehlala emanzini apholileyo nangaphezulu kweoksijini yitrout. Umthamo weoksijini onyibilikiswe emoyeni ungaphantsi kunoko unyibilike kumthamo ofanayo wamanzi. Ukusuka kolu luvo sinokuthi sikhuphe ukubaluleka kokugcina i-aquarium kakuhle ioksijini kodwa hayi kakhulu.
Njengoko ii-aquariums zethu ziinkqubo ezivaliweyo apho kungekho kuhamba kwamanzi, ikwangabo ekufuneka bevelise ukusasazeka kweoksijini ngokuqhubekayo. Enye yeendlela kukufaka ifayile ye- ioksijini yasemanzini. I-oksijini ye-aquarium inoxanduva lokuvelisa amaqamza ayindlela yokwaphula umphezulu wamanzi kunye nokukwazi ukuwahambisa ukubamba ioksijini esemoyeni. Ke ngoko, kufuneka sazi ukuba inani lamaqamza anyukayo aya kuxhomekeka kwinqanaba leoksijini enyibilikileyo emanzini. Ikhefu Inani lamabhamu lincinci, isixa seoksijini enyibilikisiweyo emanzini iya kuba sezantsi. Ukuba unemfuno ephezulu yeoksijini, uya kuba neemeko ezinqongopheleyo zeoksijini kwaye iintlanzi zinokuxinana.
Ukwazi oku, kufuneka sazi ngakumbi nangaphantsi iimfuno zohlobo ngalunye lweentlanzi ngokuxhomekeke emanzini kunye nobungakanani bazo. Ingxolo yeoksijini yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Zininzi iintlobo zeoksijiniyitha ye-aquarium ngokuxhomekeke kwixabiso layo kunye nomgangatho wayo. Umbono kukuthenga iimpompo ezithe cwaka kuba uninzi lwenza ingxolo ebonakalayo enokubangela ukungonwabi kwiintlanzi.
Iindlela zokuphefumla i-aquarium
Icebo lokucoca ulwelo ngokwalo lokucoca amanzi linokunceda ekunyuseni i-aquarium. Ukuba isihluzo sinamandla ngokwaneleyo okuhambisa umthamo wamanzi kwitanki lakho, ungawakhomba amanzi ngaphezulu. Kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba amanzi awatshizi ukuze angaqali ukukhupha i-aquarium kwaye ingxolo engeyomfuneko iyathintelwa. Ukubeka icebo lokucoca ulwelo ukuze ligungxule phezu komhlaba kwanele ukukhupha i-aquarium emanzini. Unokuthatha ithuba lokucoca ulwelo lwangaphakathi olilahlileyo ukuze ukwazi ukuhambisa umphezulu wamanzi kakuhle. Le yindlela esiphumeza ngayo ukuba amandla eoksijini angonyuka.
Enye indlela yokwenza i-oxygenate aquariums yile ngokusebenzisa izityalo zokungenisa umoya. Izityalo zinceda ekuphefumlweni kwamachibi kunye namanzi. Icala elisezantsi kukuba libonelela kuphela ngeoksijini emini. Bafuna inani elifanelekileyo lokukhanya kunye nekhabhon dayoksayidi ukuze ifotosinthesisi. Izityalo ziphefumla ebusuku, oku kuthetha ukuba ziya kudla ioksijini. Oku kwenza ukuba kungafuneki ukuba usebenzise isixhobo oksijini kwi-aquarium kwaye uthintele iintlanzi ekuhluphekeni ngenxa yokungabikho kweoksijini.
Ukuqukumbela sinokuthi ukuphefumla yinkqubo ebalulekileyo kubomi beentlanzi kwaye ke kubalulekile ukuba wenze i-oksijini i-aquarium ngokufanelekileyo. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokungabinako ukuswela okanye ukugqitha kweoksijini kwi-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Akukho ntswelo okanye oksijini igqithileyo kwi-aquarium
UFernando GA sitsho
Enkosi kakhulu ngokwenene ...
Ndincede ndibone ukuba kutheni ezinye iintlanzi ezimbini ziswelekile: '(
Phendula uFernando GA
Ndifaka ioksijini kwi-aquarium yam ngesihluzo sobhaka ayikho enye into, ndiyisusile impompo yam yeoksijini nesisasazi ... Sisebenze kakuhle kum ... Kuphela sisikali esikhulu esiphezu komhlaba ixesha elide, nangona oku kwenziwe phambi kokususa impompo kunye nesisasazi…. Yandisa isantya sokuhamba kwesihluzi se-knapsack ukuze umphezulu ube nentshukumo engaphezulu ... ndiza kuphawula ukuba esi sikala «siyaphucula»